Jenezy 26 - Ny Baiboly
Jenezy toko 26
Ny nitoeran'Isaaka tany Jerara - Fampanantenan'Andriamanitra - Fifankahazoana tamin'i Abimeleka.
1Nisy mosary indray tamin'ny tany; hafa fa tsy ilay mosary fony fahavelon'i Abrahama. Ka lasa Isaaka nankany Jerara amin'i Abimeleka, mpanjakan'ny Filistina. 2Ary Iaveh niseho taminy, ka nanao hoe: Aza midina any Ejipta, fa mitoera amin'ny tany izay holazaiko aminao. 3Dia eto amin'ity tany ity mitoetra; fa homba anao aho, sy hanisy soa anao; homeko anao sy ny taranakao ireto tany rehetra ireto, fa hotanterahiko ny fianianana nataoko tamin'i Abrahama rainao. 4Hampitomboiko tahaka ny kintana eny an-danitra ny taranakao; homeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto; ary amin'ny taranakao no hanasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, 5satria efa nihaino ny feoko Abrahama ary nitandrina ny teniko sy ny didiko amam-pitsipiko sy ny lalàko. 6Dia nitoetra tao Jerara Isaaka.
7Nanontanian'ny olona tompon-tany ny amin'ny vadiny izy, ka namaly hoe: Anabaviko io, satria natahotra ny hilaza hoe vadiko izy; fandrao vonoin'ny olona noho ny amin-dRebekà aho, hoy izy, fa tsara tarehy izy. 8Nony ela no nitoerany tao Jerara, sendra nitazana teo am-baravarankely kosa Abimeleka, mpanjakan'ny Filistina. Ka indro Isaaka hitany nisangy tamin-dRebekà vadiny. 9Dia niantso an'Isaaka izy, ka nanao hoe: Hita fa vadinao mihitsy izy. Ka ahoana no nilazaonao hoe: Anabaviko io. Ary hoy Isaaka taminy: Satria, hoy aho anakampo, sao dia maty aho noho ny aminy. 10Ka hoy Abimeleka: Ahoana no nanaovanao izany taminay? Fa nety ho nisy nandeha tamin'ny vadinao ny olona ka ho nampiditra fahotana taminay hianao. 11Dia nomen'i Abimeleka teny ny vahoakany rehetra, nataony hoe: Izay mikasika io lehilahy io na ny vadiny dia vonoina ho faty. 12Ary Isaaka namafy tamin'izany, ka nahavokatra avo zato heny izy tamin'io taona io. 13Nambinin'ny Tompo ka tonga mpanankarena ralehilahy; ary nandroso nandroso ihany izy nampitombo ny hareny, mandra-pahatongany ho manana harena tsy hita noanoa. 14Nananany andiany maro ny biby fiompy na lehibe na kely; ary nananany betsaka koa ny mpanompo; ka velom-pialonana azy ny Filistina. 15Nototofan'ny Filistina nofenoiny tany avokoa ny lavaka fantsakàna nohadin'ny mpanompon-drainy, fony fahavelon'i Abrahama rainy. 16Ary Abimeleka nanao tamin'Isaaka hoe: Mandehàna miala aty aminay hianao, fa efa mahery lavitra noho izahay. 17Dia nandeha Isaaka ka niorin-day teo an-dohasahan'i Jerara sy nonina teo.
18Ary ny lavaka fantsakàna voahady fony fahavelon'i Abrahama rainy izay nototofan'ny Filistina nony maty Abrahama dia nohadin'Isaaka indray, ka nasiany anarana araka ny anarana nomen-drainy azy ihany. 19Mbola nihady teo amin'ny lohasaha koa ny mpanompon'Isaaka, ka nahita loharano velona teo. 20Fa niadin'ny mpiandry ondry tao Jerara ny mpiandry ondrin'Isaaka nataony hoe: Anay ny rano. Ka nataon'Isaaka hoe Esaka ny anaran'ny lavaka fantsakàna, satria niadin-dry zareo izy. 21Ary nihady lavaka fantsakàna hafa indray ny mpanompon'Isaaka nefa mbola niadina ihany koa io, ka nataony hoe Sitnà no anarany. 22Dia niala teo izy ka nihady lavaka fantsakàna hafa indray, izay vao tsy niadina intsony, ka nataony hoe Rekobota ny anarany: Satria, hoy izy, efa nomen'ny Tompo toera-malalaka isika, ka hiadana amin'ny tany.
23Avy eo izy dia niakatra ho any Bersabea. 24Ary niseho taminy Iaveh ny alin'izay ka nanao hoe: Izaho no Andriamanitr'i Abrahama, rainao, aza matahotra fa momba anao aho; ka hanisy soa anao ka hahamaro ny taranakao, noho ny amin'i Abrahama mpanompoko. 25Dia nanangana otely teo Isaaka, ka niantso ny anaran'ny Tompo. Ary niorin-day teo izy, ka nihady lavaka fantsakàna teo ny mpanompony.
26Ary nanatona azy avy any Jerara Abimeleka, nomban'i Okozota sakaizany, sy Fikola, filohan'ny tafiny. 27Fa hoy Isaaka tamin'izy ireo: Ahoana no anatonanareo ahy nefa sady mankahala ahy hianareo no nandroaka ahy hiala tany aminareo? 28Ary hoy iretsy: Efa hitanay miharihary fa momba anao Iaveh, ka hoy izahay: Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy hianao; ka hanao fanekem-pihavanana aminao izahay. 29Aoka hianiana hianao fa tsy hanisy ratsy anay, araka ny tsy nikasihanay anao akory, na nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara hianao. Ary hianao izao no ilay hasoavin'ny Tompo. 30Dia nanao fanasana ho azy ireo Isaaka ka nihinana sy nisotro izy. 31Ary nifoha vao maraina koa izy, dia samy nanao fianianana izy roa tonta, izay izy ireo vao nalefan'Isaaka; ka dia lasa soa aman-tsara niala taminy.
32Tonga tao amin'Isaaka androtr'izay ihany ny mpanompony, nilaza ny momba ny lavaka fantsakàna izay nohadiny tamin'izany ka nanao taminy hoe: Efa nahita rano izahay. 33Dia nataony hoe Sibea ny anaran'ny fantsakàna. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Bersabea mandraka androany.
34Rahefa efa-polo taona Esao dia nanambady an'i Jodita, zanak'i Beerì, Heteana, sy Basemata, zanak'i Elona, Heteana. 35Nahasorisorena mafy an'Isaaka sy Rebekà izy ireny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0096 seconds